mairie-antananarivo – Ministeran’ny rano-CUA- SAMVA
Ministeran’ny rano-CUA- SAMVA
administrateur 6 novambra 2018 Commentaires fermés
Hahazo kamiao manokana mpitaona fako miisa 16 ny Samva
Hahazo kamiao lehibe manokana harifomba mpitatitra fako miisa 16 ny Samva. Naseho omaly teny amin’ny foiben-toeran’ny Samva teny Ampasampito- Nanisana ny santionany tamin’ireo fiara lehibe mpitatitra fako ireo. Izao no tontosa dia noho ny fiaraha-miasa eo amin’ny ministeran’ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana, ny Kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), ary ny SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d’Antananarivo).
Nanolotra izany ny avy amin’ny ministeran’ny rano nahitana ny talen’ny kabinetran’ny Ministera Aina Stelanony, ny sekretera jeneraly Lalaina Andrianamelasoa, sy ny avy amin’ny CUA tamin’ny alalan’ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna, kolonely Emilien Ramboasalama ; nandray izany kosa ny tale jeneralin’ny Samva, kolonely William Rakotoarivony. Ireo fiara mpitatitra lehibe manokana azon’ny Samva ireo dia miaty 20 m3, ka afaka mitaona fako hatramin’ny 30 taonina isaky ny mandeha, atao ho fiatrehana ny mahabetsaka ny fako amin’izao vanim-potoana izao, sy ho ady amin’ny fihanaky ny valan’aretina ihany koa. Ankoatra izay, hahazo daba lehibe fanariam-pako iraisana miisa 51 koa ny Samva ao anatin’ity tetikasa ity. Tsy misy ny olana eo amin’ny kaominina sy ny Samva hoy ny lefitra voalohan’ny ben’ny tanàna, kolonely Emilien Ramboasalama, nandritra izany.
Ireo fiara lehibe mpitatitra fako manokana sy harifomba ireo dia tena ho an’ny Samva fa tsy hofain’izy ireo intsony. Tokony hajaina koa ny fotoana fanariam-pako dia amin’ny 5 ora hariva ka hatramin’ny 8 ora alina, mba ho afaka manala fako amin’ny alina ireo kamiao an’ny Samva.